ECG inoshanda Apple Watch Series 4 inogona kumisikidzwa chero kupi | Ndinobva mac
Basa reECG paApple Watch Series 4 inogona kumisikidzwa chero kupi
Uye ndezvekuti kukamurwa kweApple Watch Series 4 neiyo electrocardiogram basa rinogumira kuUnited States (painotangwa zviri pamutemo) inogona kushandiswa zviri nyore nevamwe vashandisi vasingagare munyika uye vane modhi inoenderana.
Iyo itsva Apple Watch yakazivisa iyi nyowani electrocardiogram (ECG) mashandiro ekutenda ku De Novo's FDA yekufanirwa, izvo zvisiri kureva neimwe nzira kuti mudziyo uyu haukonzere kukuvadza mushandisi anoishandisa.
Ichi chitsva EKG ficha ichave ichishandiswa pasirese nekungochinja dunhu pane chishandiso. Hongu, sekune mamwe maapplication eIOS anongowanikwa mune imwe nyika uye nekushandura dunhu ratinoishandisa neichi chitsva ECG basa iwe unogona zvakare kuita. Dambudziko rega ratinogona kuve naro nderekuti marongero enguva nemazuva anochinja kana uine mudziyo nedunhu reAmerica.
Kuti tiite izvi isu tinongofanirwa kuenda ku: Zvirongwa> Zvimwe> Mutauro uye Dunhu> Dunhu uye sarudza "United States". Nenzira iyi tichava nebasa rinoshanda kunyangwe risingawanikwe munyika medu. Panyaya yeSpain, tinotaura nezve kupera kwegore kana kutanga kwa2019, nepo izvi zvichiitika zvinogona kushandiswa pese paunoda nekuda kwekuchinja kwenharaunda. Kune rimwe divi, izvi zvinonzi zvinowanikwa nekuona yazvino beta vhezheni, Apple inogona kuzvishandura panguva yekutanga kwebasa racho saka Tichava vakanyatsozvisimbisa.
Kuti tishandise iyi ECG mune nyowani Apple Watch Series 4 isu tinofanirwa isa chigunwe pakorona yako nyowani yedigital uchipfeka wachi. Mune isingasviki mineti iwe unenge wave kukwanisa kuziva yako yekurova kwemoyo uye panguva imwechete kuziva kana chakaringana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Basa reECG paApple Watch Series 4 inogona kumisikidzwa chero kupi
Ungachinje sei gadziriro yeSiri izwi paMac
Isa rako rakaomarara dhayeti pane chikafu neDisk Dhayeti uye sununguka nzvimbo pakombuta yako